Macluumaadka Shirkadda - Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 2005, Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. waxay isu xilsaartay horumarinta iyo soo saarista shooladaha xaabada lagu gubo iyo kuleylka banaanka. Shirkaddu waxay mideysaa naqshadeynta, cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga. Waxay leedahay aqoon isweydaarsi gaaraya 30 kun oo mitir laba jibbaaran oo leh khadad wax soo saar oo heer sare ah, waxayna shaqaaleeyaan teknoolojiyad hoggaamineed, cilmi baaris iyo koox caan ah. Badeecadaha waaweyn ayaa ka gudbay imtixaanka EU CE, waxay gaareen heerka EU Ecodesign 2022 waxayna heleen shahaadada EPA ee Mareykanka. Waxaa aqoonsan saddex nidaam oo caalami ah oo tayo, deegaan, caafimaad iyo badbaado shaqo leh.
Warshadu waxay kasbatay shahaado ISO9001: 2015 oo leh nidaam wax soo saar tayo tayo leh si loo hubiyo tayada iyo tirada wax soo saarka.
Shan magac oo noo gaar ah ayaa aqballay macaamiil badan. Gaar ahaan Goldfire wuxuu aasaasay saldhig suuqeedka codka ee EU. Waxaan leenahay laba shirkad ganacsi oo ajnabi ah. Labada shirkadoodba waxay leeyihiin khibrad soo dejin iyo dhoofineed oo qani ah oo leh wacyi gelin xagga adeegga ah oo horumarsan. Waxaan macaamiisha siineynaa xalal hal-joogsi ah si aan uga caawino inay balaadhiyaan suuqa.
Xuzhou Goldfire Shove Co., Ltd.
Baaxadda ganacsiga waxaa ka mid ah meelaha dabka lagu shito, qalabka kululaynta, kuleyliyaha iyo qalabka kaabayaasha,
sahay kaamamka, farsamada gacanta iyo wixii la mid ah.
Muujinta Awooda Wax Soo Saarka
Nidaamkeenna aasaasiga ah waxaa ka mid ah goynta, alxamida, nadiifinta, isku imaatinka, rinjiyeynta iyo baakadaha. Baadhitaanka alaabta ceyriinka ah si adag ayaa loo xakameeyaa, alaabada ceeriin ee aan u qalminna waa mamnuuc in la isticmaalo. Maaddada, cabbirka iyo caaryada ayaa la jaan qaadaya sawirka si loo hubiyo cabbirka lebiska. Shaqo kastaa waxay ku dhalaalaysaa sida sawirka iyo shuruudaha looga baahan yahay. Ma jiro haraaga la kiciyey, gees af iyo xagal toona ma leh. Dhamaadka qaybaha la safeeyey waa hagaagsan tahay. Xargaha ayaa lagu rakibay sida loogu baahan yahay si loo hubiyo ku habboonaanta dhammaan qaybaha sheyga. Rinjiyuhu ma laha rinji soo daadanaya ama midab qulqulka oo leh god yar oo ciid ah. Waxaan leenahay aag wax lagu baakadeeyo si aan u ilaalino muuqaalka alaabta iyo alaabada wax lagu rakibo oo nadiif ah. Shaqaalaha kontoroolka tayada ayaa sameyn doona hubinta barta inta lagu jiro dhammaan howlaha wax soo saarka. Kaliya alaabooyinka aqoonta u leh ayaa geli kara nidaamka soo socda, taas oo hubin karta in macaamiisheena ay helaan alaab tayo sare leh.
Waxaan haynaa afar xarig oo wax soo saar oo otomaatig ah, Mashiinka jarjarada laser-ka ee waaweyn ee Prema, mashiinka jarjarka ee plasma CNC, mashiinka foorarsiga ee CNC, mashiinka xiirista CNC, mashiinka cadaadiska weyn, mashiinka toogashada toogashada jiifka ah, crane gantry, forklifts iyo mashiinada kale iyo qalabka. Iyada oo gacan laga helayo qalab cusub, waxsoosaarkayagu wuu kordhay waxaana la hubinayaa waqtiga dhalmada.
Kooxda Iyo Dhaqanka Shirkadaha
Waxaan wax u qabanaa waxoogaa ka duwan, waana sida aan u jecel nahay!
Kooxdayadu waxay ka kooban tahay koox dhalinyaro 80-jir ah iyo koox xiisaha badan 90-ka, qof walba wuxuu ka buuxo xamaasad shaqo iyo ruux adeeg.
Dhaqankeena shirkadeed wuxuu ka kooban yahay toddobo arrimood: marka hore macaamilka, shaqada kooxda, qaadashada isbeddelka, farsamada gacanta, daacadnimada, qiiro iyo u heellan. Shaqadeenna, waxaan had iyo jeer maskaxda ku haynaa dhaqanka shirkadaha.
Iyadoo la raacayo hagida dhaqanka shirkadaha, waxaan aaminsanahay inaan heli doonno aqoonsi macaamiil ah oo aad iyo aad u badan, waxaan horumarin doonnaa si ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan.
Wax Walboo Aad Rabto Inaad Ka Ogaato
Foornada Cuntada lagu karsado, shooladda birta ah ee birta ah, Teendhada Qoryaha Teendhada, Kaam Dabka Gubay, Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah,